लौ हेर्नुस् यो केटीको चाला, २० केटासग‘ लभ, २० वटा आईफोन लिएर घर किनिन् ।::mirmireonline.com
लौ हेर्नुस् यो केटीको चाला, २० केटासग‘ लभ, २० वटा आईफोन लिएर घर किनिन् ।
एजेन्सी कार्तिक १४ । मान्छे अनेक थरीका पैदा हुन थालेका छन् । चीनकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत २० जना केटासग‘ लभ गरेर प्रत्यक केटाबाट आईं फोन ७ किन्न लगाएर अन्ततः सबै आईफोन बेचेर आफू बस्ने घर किनेकी छन् ।
चीनको एक ब्लग तियान या यी तु नामक ब्ल्गमा छापिएको खबर अनुसार मिडियाले राखेको शियाओवी नामकी ती युृवतीले आफ्ना सबै २० ब्वाईफ्रेन्डलाई आईफोन सेभेन किन्न लगाएर आर्थिक जीवन सुधारेकी छन् । शेनजेन शहरमा बस्ने ती महिलाले ह्वी सु नामक वेभसाईटमा सबै आईफोन सेभेन बेचेर एक लाख १५ हजार १० युयानमा बेचेर सो पैसाले थपेर एउटा घर नै खरीद गर्न सफल भएकी छन् ।
उनले प्राउड कियाओबा नामकी साथीलाई घर देखाएर यसको पछाडीको कहानी सुनाए पछि सबै छक्क परेका थिए । आफ्नो बाबु आप्रवासी कामदार रहेको र आमा गृहणी रहेकोले घरमा प्रसस्त पैसा नभएको बेला उनले जुक्ति लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पैसावाला केटाहरुलाई प्रेम जालमा पारेर आईफोन किन्न बाध्य पारेकी हुन् । चीनको माईक्रो ब्लगिङ साईट बीबोमा एउटा ह्यास ट्याग चलिरहेको छ २० फोन बराबर एक घर यसले व्यापक ट्रैड गरीरहेको छ । यो एक करोड ३० लाख भन्दा धेरै पटक प्रयोग भएको छ ।
सोसियल साईटमा शियाओलीको प्रशसा गर्दै धेरैले लेखेका छन् । एक युवतीले मेरो त एउटा पनि केटा साथी छैन , अब तिमीसग‘ नै सिक्नु पर्ला भनेकी छन् । कतिपयले उनलाई बेईजति आईमाई भन्दै आलोचना गरेका छन् । बिबिसी स्रोतले पुष्टी गरे अनुसार उनले २० वटा आईफोन प्रत्यक ५ हजार ७ सय ५० रुपैयाका दरले बेचेकी थिईन् ।
रातारात ९ करोडको मालिक बने यी किशोर विद्यार्थी ! यस्तो छ कारण
यी हुन् घोडासम्बन्धी रोचक तथ्य !
आकाशबाट अचानक सुन, हिरा लगायत बहुमूल्य धातु खस्यो…
भाईरल बनेको सेक्स भिडियोले जीन्दगी तहसनहस मात्रै भएन यसरी मृत्युको मुखमा पुगिन् …
चन्दा माग्दा ज्यान मार्ने धम्की आएपछि….